‘स्वाइन – फ्लू’ के हो ? कसरी जोगिने ? | Nepali Health
‘स्वाइन – फ्लू’ के हो ? कसरी जोगिने ?
२०७३ फागुन २२ गते १०:५६ मा प्रकाशित
सन् २००९ मा सुँगुर, मानिस र चरामा पाइने इन्फ्लुएन्जा भाइरसबीच triple reassortment भइ पहिलो पटक स्वाइन फ्लू देखा परेको थियो । त्यसको १ बर्ष भित्रै २१४ देशमा यो फैलन गई करिव १८ हजार मानिसको ज्यान लिएको थियो । नेपालमा गत वर्षको बर्खायाममा स्वाइन फ्लुको भाइरस देखिए पनि यस पटक निकै अगाडि उक्त रोगको भाइरस देखिएको छ ।
– सुभाषचन्द्र अर्याल (Subasaryal98@gmail.com)
स्वाइन फ्लूका लक्षणहरु :
कसरी फैलन्छ स्वाइन फ्लू ?
स्वाइन फ्लु सरुवा रोग हो । सर्वप्रथम त सुँगुर को सम्पर्कमा नियमित रहिरहने मानिसहरुमा सुँगुरबाट यो भाईरस सर्ने गर्दछ। सुंगुरबाट सर्ने भए पनि राम्रोसँग पकाउँदा त्यसमा भएका कीटाणु पनि मर्छन् र मासु खाँदा भने यो रोग लाग्दैन ।
त्यस पछी स्वाइन फ्लू प्रभावित व्यक्तीहरुको सम्पर्कमा आउँदा हावाबाट सर्ने गर्दछ । रोगीले कुरा गर्दा, खोक्दा वा हाँच्छिउ गर्दा संक्रमितले प्रयोग गरेको सामानको प्रयोग गर्दा विषाणु वातावरणमा फैलिन्छ र यो रोग अरुमा सर्दछ् । स्वाइनफ्लुको विषाणु सामान्य रुघाखोकीजस्तै फैलिन्छ । भाइरस शरीरभित्र गएको सात दिनभित्र स्वाइनको लक्षण देखिन सक्छ ।
यो रोगले विशेष गरी अङग प्रत्यारोपण गरेका, रोग प्रतिरक्षात्मक शक्ति कम भएका, अन्य जटिल रोगवाट संक्रमित व्यक्ति ,गर्भवति महिला ,बच्चा बालबालिका ,वृद्ध बूढाबूढीहरुलाई बढी सताउने गर्दछ ।
मन्त्रालयको निर्णयप्रति एघारौँ तहका निर्देशकको चर्को असन्तुष्ठी